Yintoni eyenza inkqubo yophuculo lwenjini yokusebenza iphumelele?
Ngokwezibalo, iinjinini zophando zinceda abanikazi bezorhwebo banyuse ukuthengisa kwabo kukhokelela kuma-50% kwiinyanga zokuqala. Inkqubo yokuphucula iinjongo zokupasa i-intanethi ngokuqhelekileyo iquka izinto ezintathu:
Abaxhasi abanokuqhuba indawo kwisayithi lakho;
Ukugcina loo mathuba ngokudala umyalezo onyanzelisayo kunye ochaphazelekayo;
Ukuguqula iindwendwe zewebhusayithi kubaxhasi abaqhelekileyo.
Kwinqaku lemihla, ndiya kukuxelela ngezinto ezithile ezilula ongayenza ukuqala i-SEO yakho yewebhu kwienyawo zokunene - commercial property appraisals. Ngezantsi uluhlu lweengcebiso eziphezulu zokuphucula inkqubo yakho ye-SEO.
Ukuchonga abaphulaphuli bakho abakujolisweyo
Ukuqonda abaxumi bakho yingxenye ebalulekileyo yenkqubo yokusebenza yenkqubo yokucwangcisa injini.Kufanele ukwazi abaphulaphuli bakho ukuba ufuna ukuphumelela ngexesha elide. Ngaphambi kokuba uqalise umkhankaso we-SEO kwiwebhusayithi yakho, cinga ukuba ngubani ozama ukutsala ngqo. Emva kokuba ufumene iinjongo zakho zokuthengisa ezifanelekileyo, qaphela ukuba yintoni umxholo oya kubangalisa abo bantu. Gxininisa zabo iimfuno kunye neemfuno zabo. Emva koko, sigqibo malunga nendlela ongakhuthaza ngayo iindwendwe zendawo ukuba usebenzisane nebhizinisi lakho.
Hlalani nikhumbule, abathengi bakho bayisisiseko esiphezulu apho uphumelele kwishishini lakho kuxhomekeke. Yingakho kubaluleke kakhulu ukuba ubaphathe kakuhle. Iinkqubo zokuthengisa zengcali kunye nokuqwalaselwa kwenkcukacha nganye zizinto eziphambili zokwakha ubudlelwane bamakhasimende obuncedo
Hlaziya umgangatho weWebhusayithi yakho
Hlola umxholo kwisayithi yakho ngokusekelwe iminqweno yabaxhasi, iimfuno, iimfuno kunye nokukhetha. Qinisekisa ukuba unomxholo wazo zonke iintlobo zabathengi. Ukuba akukho, cingisisa ngalezo ziqulatho zomxholo onokugcina amathuba akho kwiwebhusayithi.
Ukuphanda ukhuphiswano kuseloko kusisigqibo esifanelekileyo. Qala ukuphonononga ii-sites of your main competitors. Hlola indlela efanelekileyo ngayo kwiGoogle malunga neenkcukacha zakho zokuphenya eziphezulu. Ngokuqhelekileyo, kukho abanye abaphiswano kumashishini onokungazi. Ngethamsanqa, unokukwazi ukuwafumanisa ngokukhawuleza ngokusebenzisa "indawo ezifanayo" kwiGoogle. Ngamhla, iinjongo zokukhangela zinokukwazi ukubona ukuba zeziphi iziza ezifanayo ngokuhlalutya umxholo wazo kunye nezikhonkwane ezibhekiselele kumthombo othile.
Khetha iinqununu ezifanelekileyo
uphando lwegama elingundoqo lenye inxalenye ebalulekileyo yenkqubo efanelekileyo yokuphucula injini.Konke okufuneka ukwenze ukuchonga ibinzana ezibalulekileyo zekhredithi yakho ngokusekelwe kukuthandwa kunye nokufaneleka. Zibeke kwizicathulo zabathengi bakho kwaye uzame ukuqonda indlela abaza kuqhuba ngayo uphando kwiinkonzo ozenzayo. Iingcali ze-Semalt zincoma ukuba usebenzise ezi zilandelayo ngcebiso xa uchonga amagama anelungelo lokucinga:
Ukuhlalutya idatha yesitatisti yesayithi;
Ukuqhaqhaqhaqhafaza kunye nabaxhasi abakhona;
Ukuphonononga iziphumo zophando lwewebhusayithi;
Ukuhlola iisayithi zokhuphiswano;
Indawo yokuvavanya ngephulo le-PPC;
Ukusebenzisa izixhobo zobuchwepheshe xa wenza uphando lwegama elingundoqo.
. Ukukhangela amatye kwizinto zakho zokusebenza kuyisinyathelo sokuqala kwinkqubo yokupasa injini yokukhangela. Kwenzeka ntoni emva kokubona amehlo kwisayithi yakho kuya kuxhomekeka ngokupheleleyo ekubeni unako ukubeka ingqalelo yabo. Njengoko bethetha, sebenzela kanzima oko ufuna - ayiyi kuza kuwe ngaphandle kokulwa.